Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Raga? | shumis.net
Home » galmada » Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Raga?
Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Raga?
Hore waxaan idin kugu soo gudbinay akhristayaasha nala socday Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Haweenka.
Maanatana waxaan halkaan idin kugu soo gudbineynaa Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Raga. Ayadoo nuucyo kale duwan rabi u abuuro xubinta Raga usameeysanyihin ayaa dumarka kala jecelyihiin qaababka ukala baxaan Xubinta malabyarowga raga ayadoo hore nooga barateen in wax badan niga fahansiino arimaha galmada.
Xubinta Raga aya inta badan usmaeeysanyihin ame rabi u abuuran shan nuuc ayadoo jiraan qaabab kale balse aan sidaaa u badneyn.
Geydka raga oo Caato ah isla markaa gaabanyahe waxaana baaris lagu ogaaday in aan shaqo badan qaban karin geydkaas oo durba daalo.
Geydka Raga oo ah mid aad u dheer inta badan waxa oo kasoo baxaa shaqada oo si fican u suga ame waajibkiisa marsiiya waaxaana jecel Dumarka Kacsi laboodka ah.
Geydka oo ballaaran oo u dhexeeya dheeraan iyo gaabnaan, noocan midka ay haweenka badan kooda ugu jecelyihiin shaqo fiicanna waa qaban karaa, inata badan ninka bahalkiisu sidan yahay waa kacsi badanyahay naagaha aadka u kacsiga badan midkan ayay aad u jecel yihiin.
Geydka dheer oo balaaran nuucaan kuma fiicna gabdhaha yar yar wuxuuna si aaad u anfacaa dumarka kaweyn 30sano jirka iyo wixii ka badan wuxuuna sababaa in haweneyda mar waliba asaga kashekeyso oo hadii kala tagaaan usoo xiisi doonto.
Geyd Faruura waa weyn oo xidido badan isla markaa ka xajiimoooda marka haweeneyda oo galsho kadibana xoqitaan kula dhaqaaqa maka kasoo bixiyo kaasna dumarka inta badan ma jecla marka laga reebo xogaa yar .
Hadaba kabixi fakarkaada?
Title: Nuucyada ukala Baxdo Xubinta Taranka Raga?
Posted by Unknown, Published at July 17, 2016 and have 0 comments